Gburugburu ọnya gasket maka okpomọkụ Exchanger - CIXI DONGFENG akara & mbukota Co., Ltd
Gasetị ọnya gburugburu maka okpu ọkụ
Igwe egwu na-acha uhie uhie na mgbanaka dị na mgbanaka dị n'ime, nwere teepu "V-udi" (ma ọ bụ "W-udi") na teepu na-enweghị atụ, nke na-agabiga ibe ya na ọnya na-aga n'ihu. na ọgwụgwụ mgbe na-tak welded. Site na nkwado nke mgbanaka mpụga na mgbanaka dị n'ime, enwere ike iji ya na ihu ihu welitere. Featurea sara mbara nke onodu oru di nma. Ike ga-eji n'okpuru elu okpomọkụ, elu nsogbu na àjà ihe ọ ultraụ -ụ-ala okpomọkụ ma ọ bụ vacuu ...
Igwe egwu na-acha uhie uhie na mgbanaka dị na mgbanaka dị n'ime, nwere teepu "V-udi" (ma ọ bụ "W-udi") na teepu na-enweghị atụ, nke na-agabiga ibe ya na ọnya na-aga n'ihu. na ọgwụgwụ mgbe na-tak welded. Site na nkwado nke mgbanaka mpụga na mgbanaka dị n'ime, enwere ike iji ya na ihu ihu welitere.
Azụ gas gbara gburugburu jupụta na Graphite